Magangalyo doonka cusub oo siyaaday | Somaliska
Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa ku qayaastay dadka la filayo in ay iska dhiibaan Sweden sanadkaan ay siyaaday. Qayaastii hore ee ay soo saareen bishii July ee sanadkaan ayaa ahayd 29000 oo qof balse hada ayaa la filayaa in 3000 oo dheeri ah ay ku soo siyaado tiradaas taasoo ka dhigaysa 32000. Dadkaan siyaadada ah ayaa la sheegay in ay ka imaanayaan intooda badan wadanka Serbia ka dib markii midowga Yurub uu xayiraadii visada ka qaaday. Balse Laanta Socdaalka ayaa sheegay inaysan dadkaan isisoo lugoyn oo aan qaxooti loo aqoonsan doonin. Dhinaca kale waxaa hoos u dhac ku yimid tiradii dadka Soomaalida ee iska dhiibi jiray Sweden, taasoo loo aanaynayo sharciyada adag ee ay Sweden ku soo rogtay Somalida. Arintaan siyaadada dadka magangalyo doonka ah ayaa Laanta Socdaalka ku adkeynaysa in ay si dhaqsi ah dadka kiisaskooda u dhamaystiraan taasoo keeni karto waqti dheer oo qofku uu sugayo interview iyo in go'aan laga gaaro. Migrationsverket
Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa ku qayaastay dadka la filayo in ay iska dhiibaan Sweden sanadkaan ay siyaaday. Qayaastii hore ee ay soo saareen bishii July ee sanadkaan ayaa ahayd 29000 oo qof balse hada ayaa la filayaa in 3000 oo dheeri ah ay ku soo siyaado tiradaas taasoo ka dhigaysa 32000.
Dadkaan siyaadada ah ayaa la sheegay in ay ka imaanayaan intooda badan wadanka Serbia ka dib markii midowga Yurub uu xayiraadii visada ka qaaday. Balse Laanta Socdaalka ayaa sheegay inaysan dadkaan isisoo lugoyn oo aan qaxooti loo aqoonsan doonin.
Dhinaca kale waxaa hoos u dhac ku yimid tiradii dadka Soomaalida ee iska dhiibi jiray Sweden, taasoo loo aanaynayo sharciyada adag ee ay Sweden ku soo rogtay Somalida.
Arintaan siyaadada dadka magangalyo doonka ah ayaa Laanta Socdaalka ku adkeynaysa in ay si dhaqsi ah dadka kiisaskooda u dhamaystiraan taasoo keeni karto waqti dheer oo qofku uu sugayo interview iyo in go’aan laga gaaro.